Apple ၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး I-Phone | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » Apple ၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး I-Phone
Apple ၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး I-Phone
Posted by Mr WorldWide on Feb 18, 2013 in Science & Religion, Sciences & Resources |0comments
Apple ကုမဏီသည် ၄င်း၏ မူပိုင်ထုတ်လုပ်ထားသော ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လျှို့ ၀ှက်ဖုံးကွယ်ထားတက်ပါသည်။ သို့သော် မကြာသေးမီက ၄င်းကုမဏီ၏ မူပိုင်နည်းပညာဖြင့် တီထွင်ထားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး I-Phone အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ကြေငြာလိုက်ရာ လူအများ စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါသည်။
၄င်း၏ I-Phone တွင် Touch Screen နှင့် Solar စနစ်ကို ပူးတွဲတည်ဆောက်ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လူအများမျှော်လင့်ထားသော နည်းပညာဖြစ်သည့် နေရောက်ခြည်စွမ်းအင်အား ၄င်း၏ I-phone တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါက နည်းပညာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်ကို ကောင်းစွာအသုံးချနိုင်သည့် ကုမဏီတစ်ခုဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် နေရောက်ခြည်စွမ်းအင် Solar Energy အား ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ခံကြိုဆိုကြမည်ဖြစ်ပြီး Apple ကုမဏီအနေဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ရှောက်သူများ၏ ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ပေသည်။
သန်းပေါင်းများစွာသော မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် ၄င်းနည်းပညာကိုအသုံးပြု၍ ရနိုင်၊မရနိုင်ဟူသော မေးခွန်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ အခြားကုမဏီများသည်လည်း အလားတူသန့်ရှင်းစေသာ စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပေသည်။
Apple’s patents are often held in significance since they give usaglimpse into the company’s possible future plans. One such recently approved patent seems to talk aboutasolar-powered iPhone,anotion that has certainly perked up our interest.
The idea that has been proposed in this patent is quite unique, and yet very simple. Apple proposes in its patent, numbered 8,368,654, thatamobile device can packatouchscreen that not only discerns the touch input from the user but is able to function asasolar array, powering up sunlight to provide energy to the device.